शिक्षासँगै संस्कार आवश्यक - Pradesh Today
Homeफिचरशिक्षासँगै संस्कार आवश्यक
नेपालीले विशेषगरी सनातन संस्कार, संस्कृति, परम्परा, रितिरिवाज, चाडपर्व तथा व्यवसायलाई समेत सकेजति व्यवहारिक गरेको पाइन्छ ।त्यसैले होला संसारमा तुलनात्मक रूपमा हेर्दा प्रेमी, मायालु, दयालु, स्नेही, सहयोगी, श्रद्धालु, संवेदनशील सहकार्यता तथा सद्भाव भएको अधिकांश व्यक्ति नेपाली नै पाइएको छ ।
पछिल्लो केही दशकयता मानवीय समग्र गुणमध्ये माथि उल्लेख गरिएका शब्दहरू व्यवहारिक हुन नसकेको महसुस हामीले गर्दैछौँ जुन साझा चिन्ता तथा चिन्तनको विषय रहेको छ । विगतमा नेपाली संस्कार, संस्कृतिको वास्तविक भोगाइलाई पश्चिमी मुलुकका संस्कृतिविद्हरूसमेत आश्चर्य चकित भएका छन् । मिलिजुली बसौं बाँडिचुडी खाऔं नेपालीको पहिचान कहाँ लोप भयो त ? विश्राम गर्न नेपालीको दैलो जाँदा स्वागत सत्कार गर्दै यथाशक्य पाहुनालाई मान मर्यादा तिर्खा भोक आरामीको व्यवस्था कुन चरिको नाम हो ? भन्ने अवस्थामा हामी पुग्दैछौं ।
जुन चिन्ता हामी नेपालीको साझा हुँदाहुँदै पनि महत्वपूर्ण मानव गहना नेपालीको पहिचान संस्कार
संस्कृति वर्तमान भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण कसरी गर्ने ? चुनौतीपूर्ण तथा अवसरको रूपमा सरोकारवालाले व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न जरूरी छ । जसको सरल शुत्र शिक्षाको साथमा संस्कार बालबालिकामार्फत लागू गर्दा हामी नेपालीले बनाएको पहिचान पुनर्जीवन दिन सकिने विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले दिएको तथ्य लिन सकिन्छ ।
उपदेश धेरै सहज हुन्छ र सबैलाई उपदेश दिन पाउँदा अस्थायी आनन्द प्राप्ति हुन्छ । आजैदेखि स्थायी शान्ति तथा आनन्दका लागि शिक्षासँगै संस्कार संस्कृति ग्रहण प्रदान गर्न सरोकारवाला लागौं ।
आजको आवश्यकता प्रशिक्षण केन्द्र, शिक्षालय, विद्यालय तथा विश्वविद्यालयबाट प्रवीण विद्यार्थीहरूले सम्बन्धित विषयगत, तहगत शिक्षाको संसारभर प्रयोग गर्न सकुन् । जुन शिक्षा स्वरोजगारमूलक, बौद्धिक, प्रविधियुक्त, मानवीय जीवनको मूल्य मान्यता बुझ्ने बुझाउने ती जनशक्ति स्वयम्, समाज र राष्ट्र सवल तथा समृद्ध निर्माण हुन गर्न सकोस् ।
शिक्षासँगै संस्कार प्रदानकर्ता प्रशिक्षक, शिक्षक, प्राध्यापक स्वयम् कति संस्कार उच्च चरित्रवान छन् त प्रश्न यहाँ पनि गम्भीर रहेको छ । कसैलाई परामर्श दिदै गर्दा परामर्शदाताले शब्द, सिद्धान्तलाई कति व्यवहारिक स्वयम्मा कति लागू गरेको छ, छैन ?
बोलेको, सिकेको, पढेको शब्द व्यवहारमा लागू गर्नु विद्या हो भने सिद्धान्त शब्दमा सीमित हुनु सिक्नु जान्नु तहगत उपलब्धि मात्र हासिल गर्नु अपूर्ण शिक्षा हो भन्ने विद्वान्हरूको भनाइ रहेको छ । कति व्यवहारिक संस्कारिक शिक्षा प्रसंगमा महात्मा गान्धीले स्वयम् सिद्धान्त व्यवहार धेरै फरक कुरा हो भन्दै आत्मालोचना गर्दै चिनी सेवन त्याग गरेको प्रसंग पढ्न पाइन्छ ।
एकजना आमाको बच्चाले आवश्यकताभन्दा अधिक चिनी गुलियो खाना खाँदा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या देखिए पश्चात् धेरै स्वास्थ्यकर्मी, परामर्शदाता, चिकित्सकसम्म पुग्दासमेत समस्याको समाधान पाएनन् । अन्त कसैले गान्धी कहाँ जाने सल्लाह दिए अनुसार उनी परामर्श लिन पुगिन् र समस्या बृत्तान्त बताइन् । आमाको कुरा सुनी सके पश्चात् गान्धीले भने एकसातामा भेट्न आउनुहोला ।
केही आशा र निराशासहित बच्चासँगै घरमा फर्किन् । साता बित्यो सबेरै गान्धी भेट्न हिडिन् समयमै भेटघाट परामर्श भयो आमाको आशा थियो बच्चालाई कुनै ठोस वस्तु औषधि दिनुहुन्छ होला । जसले उनको बच्चाले चिनी गुलियो मिठाइ तत्काल त्याग्न सकोस् ।
गान्धीले आमा र बच्चालाई एक्ला–एक्लै गरी सिद्धान्त शब्द, बानी र व्यवहारका कुरा बताए उनले भने साता दिन पहिले म स्वयम्ले गुलियो सेवन गर्थे क्रमशः मात्रा घटाउँदै गएँ आज सातौं दिनमा म पनि चिनी मुक्त भएँ । त्यसैगरी तपाईंको बच्चाले त्याग गरेको पत्तै पाउने छैनन् । साता दिन पहिले मैले मिठाइ गुलियो प्रयोग गर्दै थिएँ त्यो मेरो वाणीमा अदृश्य शक्ति थिएन अब आजैदेखि तपाईं आमाको स्थानबाट कामना गर्दै क्रमशः चिनीको मात्रा घटाउन थाल्नुस् ।
गान्धीले भने साता दिन पश्चात् साथै खुसियाली साटौंला अहिलेलाई तपाईंलाई साधुवाद मलाई सात दिनमै चिनी मिठाइँ मुक्त हुने अवसर जुराउनु भयो । त्यसैले शिक्षण, प्रशिक्षण, सहजकर्ता, परामर्शदाताको संस्कार चरित्र तथा बानी व्यावहारले निर्धारण गर्छ उसले कति ? के सिकाउने ? बालबालिका अभिभावकले अपेक्षा गरेको शिक्षा तथा ज्ञानको स्थायी उपलब्धि तब मात्र सार्थक हुनेछ । उपदेश धेरै सहज हुन्छ र सबैलाई उपदेश दिन पाउँदा अस्थायी आनन्द प्राप्ति हुन्छ । आजैदेखि स्थायी शान्ति तथा आनन्दका लागि शिक्षासँगै संस्कार संस्कृति ग्रहण प्रदान गर्न सरोकारवाला लागौं ।